Rihanna ကိုလှောင်ပြောင်ထားတဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုကို လက်ခံမိလို့ဒုက္ခလှလှတွေ့ခဲ့တဲ့ Snapchat! – AsiaApps
Rihanna ကိုလှောင်ပြောင်ထားတဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုကို လက်ခံမိလို့ဒုက္ခလှလှတွေ့ခဲ့တဲ့ Snapchat!
March 21, 2018 March 21, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Rihanna ကိုလှောင်ပြောင်ထားတဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုကို လက်ခံမိလို့ဒုက္ခလှလှတွေ့ခဲ့တဲ့ Snapchat!
၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက Pop star လေး Rihanna ဟာ သူ့ရဲ့ချစ်သူ Chris Brown ရဲ့ အရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို တော်တော်များများသိလောက်မှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်တုန်းက Rihanna အရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုသရော်ထားတဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုကို Snapchat ကသူ့ရဲ့ App မှာကြော်ငြာအဖြစ်လက်ခံမိခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာက အဲ့ဒီမှာစတာပါ။ ကြော်ငြာကို မြင်ပြီးတာနဲ့ Rihanna Fan တွေသာမက Rihanna လို DV victims (Domestic violence) တွေကပါ Snapchat ကိုတန်းပြီး Delete လုပ်ပစ်ကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် Twitter, Instagram, Facebook အစရှိတဲ့ Social media တွေမှာပါ ရှုတ်ချတဲ့ Post တွေတင်ပြီး တော်တော်လေးဂယက်ထခဲ့ပါတယ်။
Rihanna responding to Snapchat’s ad. I can’t believe they did this. pic.twitter.com/TpHQIXTm4j
အဲ့ဒီ ဂယက်တွေရဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်ပဲ ကြော်ငြာဖော်ပြလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲ Snapchat ရဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး Snap Inc. မှာရှယ်ယာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
သရော်ထားတဲ့ကြော်ငြာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Rihanna ဟာ
“Snapchat! နင်သိမှာပါ နင်ကငါ့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး app မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို။ ဒါပေမယ့် ငါအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာအတွက် အဖြေရှာနေတယ်။ ဒါဟာဂရုမစိုက်မှုလို့ပဲ ငါဆိုချင်တယ် ဒါပေမယ့် နင်ဒီလောက်အထိ မထုံထိုင်းဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ နင်ဟာပိုက်ဆံအတွက် DV victims တွေအရှက်ရစေဖို့ လှောင်ပြောင်တာတွေကို အားပေးခဲ့တယ်။ အခုပြောနေတာ ငါ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ထက် ငါ့လိုမျိုး DV victims ဖြစ်ဖူး/ဖြစ်နေတဲ့ ကလေး၊ မိန်းမ၊ ယောင်္ကျားအားလုံးကိုယ်စားအတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်။ နင်ကငါတို့ ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်မှုကိုတွန်းချနေတာပဲ! ”
ဆိုပြီး myday မှာပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်.. Rihanna အနေနဲ့ အနာဟောင်းကိုပြန်လည်တူးဆွခံလိုက်ရတာကြောင့် ဒီလောက်ပဲပြောတာတောင် နည်းသေးတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။
ကြော်ငြာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Snapchat ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း
“ဒီကြော်ငြာကိုငါတို့အနေနဲ့ လက်ခံပြီးဖော်ပြခဲ့မိတာအမှားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာကလည်းငါတို့ ကြော်ငြာထည့်သွင်း တဲ့စည်းကမ်းချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး၊ ငါတို့အနေနဲ့ဒီကြော်ငြာကို ပြီးခဲ့တဲ့ Weekend မှာပဲ ဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ။ ဒီကြော်ငြာဟာတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးနောက်တစ်ခါငါတို့ ဝန်ဆောင်မှုမှာထပ်ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ ငါတို့အနေနဲ့ဒီကြော်ငြာ လက်ခံမိတဲ့အမှားကို အဖြေရှာနေသလို နောက်အခါတွေမှာလည်း ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် သေသေချာချာလုပ်ဆောင်နေပါတယ်”
Snapchat အနေနဲ့ အခု Rihanna ပြဿနာကြောင့် ရှယ်ယာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက Kylie Jenner ရဲ့ “Snapchat ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဒီဇိုင်းကိုမကြိုက်ဘူး” ဆိုတဲ့ Twitter post တစ်ခုကြောင့် $1.5 ဘီလီယံအထိ ဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်။
So Sad ပါ Snapchat ရေ ?
Blush Gold အရောင်နဲ့ iPhone X ကိုမကြာခင်မြင်တွေ့နိုင်တော့မည်
Huawei devices တွေကိုဆက်လက်ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့တဲ့ Best Buy!